Kolo anaka : Fahiratan-Tsaina – Fieritreretana – Fietseham-Po | NewsMada
Kolo anaka : Fahiratan-Tsaina – Fieritreretana – Fietseham-Po
Mety misy koa ve ny fihetseham-po mikobona anaty eo amin’ny adolantsento ?
Iaraha-mahalala fa ny fotoanan’ny adolantsento dia fisian’ny fomba sy fihetsika tafahoatra. Izany dia mety ho fihoaram-pefy na koa fikobonana tanteraka eo amin’ny lafiny fihetseham-po. Vokatr’ity farany dia mety hisy fiafenan’ilay zatovo ao anaty fangirifiriana. Mety koa mieritreritra fa tsy misy ilàna azy ny tenany. Misintaka tsikelikely amin’ny olona akaiky azy ka mikatona ao an’efitra. Mety ho tonga any amin’ny fampijalian-tena sy ny fandratrana ny vatana aza izany. Ho an’ny adolantsento hafa kosa dia mihevitra izy fa tonga eo amin’ilay fotoana tena nandrasany hatrizay ka hahafahany mamoaka izay rehetra nokobonina hatry ny ela. Izany dia ataony amin’ny fomba manokana na tsy ampoizina izay mandalo ao an-tsainy. Matetika dia eo anivon’ireo zatovo mitovy aminy no hanaovany izany ka hampisehoany amin’izy ireo ny fahavononany hiatrika izay rehetra mety hitranga. Ao ny miatrika loza, ao ny mila ady ka tonga hatrany amin’ny fanamby mihoa-pampana. Anisan’izany ny fanaovana firaisana tsy voaaro « rapports sexuels à risques », ny fifaninanana misotro toaka be indrindra ao anaty fotoana fohy na ny « binge drinking ».
Any amin’ny tany efa mandroso dia tonga hatrany amin’ny fampisehoana ireo sedra sy fifaninanana ao anaty tranon-kalam-pifandraisana izany. Ao ny fanerena an-kolaka ny olona iray hamono tena amin’ny atao hoe « momo game ». Na koa fampirisihina an-kolaka izay miha mahery vaika isan’andro, ka miafara any amin’ny fisedrana faratampony dia ny famonoana tena aseho mivantana amin’ny internet. Io no atao hoe « défi de la baleine bleue ». Ny hifandraisan’ireo andrana rehetra ireo dia ny fampitahan’ny adolantsento zavatra roa loha : « ny fery anaty vokatry ny lalam-piainany an-daniny ary ny fanehoana am-pahibemaso ny fihetseham-po diso tafahoatra an-kilany ».
21.Ahoana kosa ny fomba fanehoan’ny olon-dehibe ny fihetseham-po miotrika tany anatiny tany ?
Azontsika an-tsaina sy tsapantsika ny maha sarotra ny manjo ny olon-dehibe iray raha toa « voafetra ny fihetseham-pony, na tsy nahy izany na an-tery tamin’ny fahazazany». Ny tena sarotra dia ny fisedrana ny andraikitra eo amin’ny fianakaviana, eo amin’ny fiaraha-monina sy eo amin’ny sehatrasa aman-draharaha rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy irosoany amin’izany. Ilaina ny fanohanana sy fanampiana azy mandritra ny fivelaran’ny sainy sy ny fitomboany. Satria ny fitondran-tenany sy ny fandrindrany ny fiainany aza manahirana vao mainka ampian’ny fahasarotan’ny fifandraisana amin’ny hafa, ary ambonin’izay koa ny fandraisana andraikitra maro isan-karazany.
Izay no nahatonga an’i FREUD mpitsabo malaza ny atidoha sy ny saina nanambara fa « ny fihetseham-po izay kobonina dia mitombo hery ao anaty aizina»